gShift: A Omumu ihe na SaaS boardnya Omume Kacha Mma | Martech Zone
Anyị na-emejuputa ngwa ngwa sọftụwia nke ngwa ọrụ ugbu a. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ọdịiche dị na atụmatụ nke ụlọ ọrụ ọ bụla mepụtara. Ka m na-eleghachi anya n'akụkọ ihe mere eme m na ụlọ ọrụ SaaS, na-enyere ihe karịrị ụlọ ọrụ iri na abụọ aka ịzụlite ahịa ngwaahịa ha, ekwenyere m na ahụla m atụmatụ kachasị mma na nke kachasị njọ.
Akpa, m kwere na e nwere isi ihe anọ ka Sọftụwia dị ka Ọrụ na ịbanye:
Ahịa Post - Ọ dị oke mkpa n'oge a maka ụlọ ọrụ SaaS ịchọpụta usoro iheomume, ntụkwasị obi, otu na ebumnuche azụmaahịa. Aga m akwado nzukọ nnabata n’etiti ahịa, onye ahịa ya na ndị nọ na ya iji hụ na ekwuputara ma dekọba ihe ọmụma ahụ nke ọma.
Okwu Mmalite Okwu - Nke a bụ isi ihe ọ bụla ị na - eme - ebe a na - enye ndị ọrụ nzere ha nzere wee banye ma nye ha ihe mmuta.
Ahịa Successga nke Ọma - Onye na-enye SaaS gị kwesịrị ịbụ ikike na ọkachamara gị na ụlọ ọrụ ahụ, na-akụziri gị na ndị otu gị ihe kachasị mma na usoro. O juru m anya na ọtụtụ nyiwe anaghị enyere ndị ahịa ha aka ịga nke ọma n'agbanyeghị nka ha nwere.
Ihe ịga nke ọma n'elu ikpo okwu - Inwe ndị ọrụ gụrụ akwụkwọ na akụrụngwa anaghị eme maka atụmatụ ịga nke ọma. iji usoro ikpo okwu SaaS kwesiri ibu ebumnuche nke uzo obula. Ruo mgbe onye ahịa gị mezue mkpọsa mbụ ha ma ọ bụ bipụtara isiokwu mbụ ha, ha emebeghị. Ojiji bụ nnukwu ihe na njigide SaaS.
Na ahụmịhe m, ndị ahịa ọhụụ nọ na gburugburu ebe niile ihe atọ dị mkpa:
Nchịkwa - inwe ndi otu tozuru oke nwere ikike idozi okwu n’oge n’oge ka ha bilitere bu ihe di nkpa maka oganihu. Ha aghaghi idowe oso na ike nke onye ahia ya.
Agbamume - inwe nkwukọrịta nke nnabata, enyi, na ịdebe otu ụzọ n'ihu ndị ahịa gị na-eme maka ahụmịhe ịtụnanya. Ikwesiri iji nwayọ na-adọta onye ahịa ọhụrụ gị ka ị jiri ngwọta gị mgbe ị na-eme ya usoro pụrụ iche.
Kwado - ndị ahịa, ọkachasị ndị na-ahụ maka ịzụ ahịa na teknụzụ, na-eche echiche nke ọma ma jiri ọtụtụ teknụzụ. Inwe ego maka ndị ahịa gị iji aka ha duzie ha ga-ebelata nrụgide nke ndị ọrụ mmadụ ma mee ka ha nwee ike ịga n'ihu.
Anyhapụ otu n'ime ihe ndị a nwere ike ime ka ndị ahịa gị ghara ịga nke ọma. Maka mụ onwe m, enwere m nkụda mmụọ mgbe a manyere m ijikọ ọsọ nke ụlọ ọrụ SaaS. Ọ bụrụ na ha dị nwayọ nwayọ ma hapụ m ka m maba, m na-anọdụ na webinars wee mee ka m na-ege ntị. Ọ bụrụ na ha emee ọsọ ọsọ, ike na-agwụ m, m na-ahapụkarịkwa ha.
Ndị ahịa gị nwere oke ọrụ ha na nsogbu ha chọrọ iji rụọ ọrụ. Usoro ọrụ ndị ọrụ, ọrụ kwa ụbọchị, na usoro ịdabere na sistemụ na-emetụtakarị ikike ha nwere ịnọ n'ụdị oge gị Ọrụ ọrụ onwe onye na-agbanwe agbanwe, yana nkwado dị elu na-eme ka usoro dị elu nke ndị ahịa nwere ike ịga na ọsọ ha - na-arụ ọrụ ngwa ngwa site na ọkwa ụfọdụ ma nwayọ n'oge ndị ọzọ.
Y’oburu n’inwe ike ijiko oso ha ma debe otu uzo n’ihu ihe ịma aka ha, igha eme ka ha nwee mmetuta - echiche mbu ha nwere nkwado gi na ikpo okwu gi.
Ihe Omumu nke Onboarding - gShift
Anyị enweela ezigbo mmekọrịta na ọtụtụ nyiwe SEO na afọ, mana otu pụtara dị ka anyị gara n'ihu na-arụ ọrụ na ndị ahịa ọdịnaya ikike anyị… ggbanwe. Dika nyiwe ndi ozo tinyere ego iji mejuputa ihe ndi ozo maka nyocha na nhazi, anyi lere anya ka gShift gara n'ihu na-eme ihe nlele ha mgbe ndi oru ahia di iche na-aru oru.
Ngwurugwu gShift toro site na ikpo okwu SEO rue ikpo okwu nnweta web. Nghọta n'ime nchịkọta isiokwu, nyocha mpaghara, nyocha mkpanaka, na mmetụta mgbasa ozi mmekọrịta, yana ọgụgụ isi asọmpi niile mere ka ọ bụrụ ikpo okwu na-enweghị ntụpọ nke anyị nwere ike iji na nke anyị na nke ndị ahịa anyị. Anyị ghọrọ ndị enyi na ndị ọrụ ibe… ma ugbu a, anyị bụ ndị ahịa nke gShift na ha bụ ndị ahịa nke anyị!
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ka ime ime n’elu mmiri mere nke ọma, elepụla anya karịa gShift. Enyere m njikwa akaụntụ, nnweta, yana ihe niile m chọrọ iji hazie ma kpọta ndị ahịa anyị n'elu ikpo okwu ha. Nke a bụ nkwụsịtụ:
GShift Enyemaka Center - Gụnyere nduzi Ntuziaka, Iji ntuziaka gShift, Ntuziaka nke ụlọ ọrụ, Akụkọ isiokwu, Mgbama na Dashboards, kontextURLs Guide, Audits Site, Integrations, Updates Product, and Training Resources.
gShift Mmeputa Ntuziaka - Itinye n'ọrụ nke ikpo okwu bụ naanị otu akụkụ nke akụkụ. Gbaa mbọ hụ na ihe ịga nke ọma nke ndị ahịa bụ ihe mgbaru ọsọ kasịnụ - yabụ gShift na-enye nduzi maka akụkụ ọ bụla nke ọchụchọ na njikarịcha ọdịnaya.
GShift Community Resources - Na mgbakwunye na ntuziaka, gShift edekọwo webinars, vidiyo, pọdkastị, ebook, usoro ọzụzụ ndị ọrụ yana mmelite ntọhapụ ngwaahịa. Nke a bụ atụmatụ pụrụ iche, na-enye ihe enyemaka na ndị na-ajụ ndị ahịa ahịa dabere na mmasị ha.
GShift Social ọwa - Ọ bụrụ na nke ahụ ezughị, gShift nwekwara blọọgụ ama ama ma na-arụsi ọrụ ike ma na-enwe mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ntanetị niile.
Ihe si na mbọ a na-etinye n'ime ihe ndị a na-akwụ ụgwọ akwụla ụgwọ. gShift na-aga n'ihu na-eduzi ụlọ ọrụ ahụ na afọ ojuju ndị ahịa na njigide ya na ndị ahịa ha na-enye nzaghachi na ịnyagharị dị mfe na ngwa ngwa karịa ndị asọmpi.
gShift ga - enyere gị aka ijikwa ọnụnọ web gị niile, asọmpi egwu, ịchụpụ ọdịnaya na mgbasa ozi mgbasa ozi, nyochaa akara ngosi mmekọrịta, nyocha arụmọrụ arụmọrụ, na ime nyocha. Obi dị anyị ụtọ na anyị na-egosikwa na anyị na ibe anyị na-arụkọ ọrụ.
Debanye maka ngosi nke gShift
Tags: Akwụkwọ ntuziakaMgbama & Dashboardsomume kacha mmantuziaka ahịa ọdịnayaọdịnaya ahịa ahịaederedeMmalite ntuziakagshiftụlọ nyocha gshiftụlọ ọrụ na-eduziMmekọrịtaIsiokwu AkụkọkontextURLs NtuziakaịnyịnyaPodcastsngwaahịa ntọhapụ mmeliteMmelite ngwaahịandekọ webinarsna -abataụlọ ọrụ ọchụchọ ọchụchọblọọgụ seoseo ọzụzụseo ọzụzụNyocha saịtịỌzụzụ ọzụzụusoro ọzụzụ onye ọrụIji ntuziaka gShiftvideos